Global Voices teny Malagasy » Ireo Tantara Voalohany Miresaka Fiainan-Jazavavy Ao Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy » Print
Ireo Tantara Voalohany Miresaka Fiainan-Jazavavy Ao Kyrgyzstan
Voadika ny 01 Novambra 2014 19:21 GMT 1	 · Mpanoratra Aishola Aisaeva Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Roa volana lasa izay, nanomboka nanoratra momba ny tantaranay manokana izahay ary namoaka izany ao amin'ny bilaoginay . Nanomboka nanangona ireo tantaran'ny tovovavy hafa avy ao amin'ny distrika samihafa ao Kyrgyzistan ihany koa izahay. Samy hafa tanteraka ny tantaran'izy ireo.
Tamin'ny mailaka nalefan'izy ireo taminay, nitantara momba ny asa mafy, fanavakavahana, sy ny rafi-pampianarana ao Kyrgyzstan izy ireo sy ny fahatsapahan'izy ireo. Nanoratra tao amin'ny bilaogy  i Jibek:
“Liana amin'ny siansa aho satria manome valiny ireo fanontaniana marobe ananantsika eto amin'izao tontolo izao izany. Isaky ny niteny tamin'ny reniko aho fa te ho lasa siantifika, nilaza tamiko izy fa tsy ho tanteraka izany, tsy natao ho ahy izany, ary tsy handray ahy amim-pahamatorana velively ny olona”
Vao haingana, nampahafantatra ny vondronay tao amin'ny seminera iraisampirenena ny iray amin'ireo mpandrindra ny Klioban-Jazavavy Mpikatroka. Seminera “Fahatsaram-Piainana, fampandrosoana sy hoavy mahafinaritra hoan'ny tovovavy tsirairay avy” notontosaina tao Almaty, ao Kazakhstan. Nizara izy:
“Tsy nisy tovovavy ankoatra ahy tao amin'ny fivoriana, kanefa momba anay, momba ny tovovavy ny lohahevitra tamin'ny fivoriana! Tsy mila olon-kafa hisolo-tena anay izahay, te haneho hevitray ho anay izahay ary hiadihevitra sy hiresaka momba anay manokana”.
Efa nahita toe-javatra tahaka izany izahay tamin'ny lasa, raha vao avy nanangana ny kliobanay. Isaky ny misy fivoriana, olona eo amin'ny faha-30 ka hatramin'ny 50 taona eo no niadihevitra momba ny olan'ny tanora, ary tsy dia nisy tanora maro tonga nanatrika izany. Olana ny tsy fanomezan'ny olona fahafahana hoan'ny tovovavy haneho hevitra ho azy ireo.
“Niresaka momba ny lanjanay sy ny tianay hotanterahina aho. Nilaza aho fa tsy ny ankizy no hoavintsika, ankehitrinintsika izy ireo. Eto izahay ary vonona handray andraikitra. Nilaza tamim-pamazivaziana ny vehivavy sasany hoe, «Tovovavy ihany koa izahay, saingy efa tovovavy lehibe sy matotra.”
Taorian'izany, nihaona tamin'ireo tovovavy avy amin'ny tetikasa izahay ary nampiditra tovovavy roa fanampiny ao amin'ny Vehivavy Mpikatroka ao Kyrgyzstan. Nanapa-kevitra hanatontosa lahatsary izahay tamin'ny Andro Iraisam-pirenena hoan'ny Vehivavy tamin'ny 11 Oktobra tamin'ny alalan'ny fomba fitantarana nentim-paharazana. Afaka mijery ny lahatsary antsoina hoe “Ny Andronay, Ny Feonay!” ahitana dikantsoratra (tsindrio ny bokotra CC) ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/11/01/65454/